Halkaan ayaad timid: Home » SONSAF » Xubnaha » Join SONSAF
SONSAF waxay xidhiid fiican la yeelatay hayadaha qaranka iyo beesha caalamka waxayna door isku xidh oo muhiim ah ka ciyaartaa ka qeybgaleyaasha aan dowliga ahayn iyo dadka dajiya go,aamada.
Waanu ka xunahay, ma aqrin karaysid foomka nagu soo biirida sababtoo ah Qoraalka Java Waa Laga Curyaamiyay ilmariyahaaga.
Hadii aad jeceshahay inaad ku soo biirtid SONSAF fadlan buuxi foomka hoos ku qoran. Waxaan kuu soo diri doonaa foomka.
Halkan ku qor e mail saxan, sida john@exaple.com
Xuruufaha Sirta ah:
U geli 5ta jifar ee xuruufaha sirta ah sida lagu tusay. Xuruufaha oo dhan amaa waa waaweyn yihiin ama waa wada yaryar yihiin.